Oge ikwu okwu na ụmụaka | Bezzia
Oge ikwu okwu na ụmụaka
Maria Jose Roldan | 04/06/2021 23:14 | Maka nwa gị
Ihe kacha njọ nwatakịrị nwere ike ime bụ iji nwa ya tụnyere ndị ọzọ. Okwu banyere okwu bụ otu n’ime okwu kacha atụ anya na ọ bụ na ọtụtụ ndị nne na nna anaghị enwe ndidi na mbụ okwu nwa ọhụrụ.
N'ihe gbasara asụsụ, enwere obi abụọ n'ụdị niile, tumadi ndi metutara oge nwata kwesiri ibido ikwu okwu ma ọ bụrụ na enwere nsogbu ma ọ bụrụ na ọ naghị eme ya n'oge ụfọdụ.
1 Nwa ọ bụla chọrọ oge ya
2 Kedu oge enwere ike inwe nsogbu n'okwu nwa ahụ
3 Etu esi eme ka umuaka nwee uto asusu
Nwa ọ bụla chọrọ oge ya
A ga-eme ka ndị nne na nna doo anya na ọ bụghị ụmụaka niile ka ha bụ otu onye ọ bụla chọrọ oge ha ma a bịa n’ịmụ asụsụ ahụ. Ọ bụ eziokwu na na ụfọdụ afọ ụmụaka niile kwesịrị ikwu okwu na-enweghị nsogbu ọ bụla ma ọ bụrụ na ọ bụghị, obere onye nwere ike ịta ahụhụ oge na mmepe okwu.
Dịka iwu, nwa ọhụrụ kwesịrị ikwu okwu mbụ ya mgbe ọ dị otu afọ. N’ọnwa iri na asatọ, onye pere mpe kwesịrị inwe ihe dị ka otu okwu 18. Mgbe ha ruru afọ abụọ, okwu ndị ahụ ga-abawanye nke ọma ma nwatakịrị ga-enwerịrị karịa 500 okwu mgbe ọ na-ekwu okwu. Nke a dị mma, ọ bụ ezie na enwere ike ịnwe ụmụaka ndị okwu ha dị ụkọ ma nwee obere okwu.
Kedu oge enwere ike inwe nsogbu n'okwu nwa ahụ
Enwere ike igbu oge n'asụsụ ahụ, mgbe nwatakịrị ahụ mgbe ọ ruru afọ abụọ enweghị ike ijikọ okwu abụọ. E nwere ihe ịrịba ama ndị ọzọ nwere ike ime ka ị mara nsogbu nsogbu asụsụ:
Mgbe nwatakịrị dị afọ atọ na-eme mkpọtụ dịpụrụ adịpụ ma ọ nweghị ike ikwu okwu ụfọdụ.
Enweghi ike ijikọ okwu na-etolite ahịrịokwu.
O nweghi ike ikwuputa na naanị ya nwere ike iitatingomi.
Ọ dị mkpa igosi ndị nne na nna na n'ọtụtụ ọnọdụ igbu oge na-agbasakarị ka ị na-eme ihe karịrị afọ.
Etu esi eme ka umuaka nwee uto asusu
Ndị ọkachamara n'ọhịa na-enye ndụmọdụ na-agbaso usoro ntuziaka ndị na-enye ụmụaka ohere ịzụlite asụsụ ha nke ọma na n'ụzọ kwesịrị ekwesị:
Ọ dị mma ndị nne na nna ịgụrụ ụmụ ha ihe akụkọ ma ọ bụ akwụkwọ mgbe niile.
Kwuo n’olu dara ụda omume dị iche iche a ga-arụ n'ụlọ.
Tinyegharịa okwu nke a na-eji eme ihe kwa ụbọchị.
Ọ bụ ihe amamihe dị na iwepụta oge na egwuregwu agụmakwụkwọ nke asụsụ ma ọ bụ okwu nwere oke ọrụ.
Na nkenke, ihe gbasara ikwu okwu bụ otu n’ime ihe na-enye ndị nne na nna nsogbu n’obi. Hụ ka ụmụaka ndị ọzọ nwere ike isi kwuo okwu ha mgbe ha dị obere na nwa nke gị anaghị atụ egwu, ọ na-atụ ọtụtụ nne na nna ụjọ. Cheta na nwatakịrị ọ bụla chọrọ oge ya, yabụ zere iji onwe gị atụnyere ndị ọzọ. Enwere otutu umuaka na egbu oge ma a bia ikwu okwu, mana ka otutu aro gasiri, asusu ha na abuzi nke oma ma ha jisie ike ikwu okwu n’enweghi nsogbu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ndị nne » Maka nwa gị » Oge ikwu okwu na ụmụaka
Igodo 5 iji chekwaa ikuku ikuku n'oge ọkọchị a
Ogige isi iyi, ji achọ na-atụrụ ndụ